လူနေတိုက်ခန်းတွေဖက်သေနတ်နဲ့ချိန်နေကြတဲ့ မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မတ် ၄၊ ၂၀၂၁။
မြန်မာမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အရပ်သား ၂၀၀၀ ရှိသွားပြီလို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအမေရိကန်သံရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာဒိထက် ပိုများနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ စစ်တပ်နီးစပ်တဲ့ လက်နက်မဲ့အရပ်သားတချို့ သတ်ဖြတ်ခံရတာတွေ ပါပုံမရဘူးလို့၊ MIPS ငြိ်မ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအင်စတီကျု့က ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးတွေမှာလည်းအရပ်သားသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တကယ်သေဆုံးသူ အရပ်သားပေါင်းအနည်းဆုံး ၂၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ MIPS အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး.. အာဏာသိမ်းစကနေပြီးတော့ အရပ်သားသေဆုံးမှုက ၂ ထောင်မကဘူးဗျ၊ အားလုံးပေါင်း ကျနော်တို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပစ်ခတ်တာတွေ၊ နှိမ်နှင်းရင်းနဲ့သေတာက ၉ ရာလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ targeted killing လို့ခေါ်တာပေါ့။ ဒီ ပစ်မှတ်ထားသတ်ဖြတ်လို့ အရပ်သားသေတာက ၁၅၀၀ လောက် ယေဘုယျလို့တော့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ အဲဒီမှာတင် ၂၄၀၀ ရှိနေပြီလေ။ နောက်ပြီးတော့ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ အရပ်သားတွေသေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ ရွာတွေမှာသေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။
ဒါတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ထင်တယ် ၂၅၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ကြားမှာတော့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ အခု အမေရိကန်သံရုံးရဲ့  (ထုတ်ပြန်ချက်)၂၀၀၀ ဆိုတာကတော့ သူတို့ဘယ်ကိန်းဂဏန်းကိုပြောသလဲကျနော်တို့လည်း မသိဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်မြေပြင်မှာ သေတာကတော့ အနည်းဆုံးတော့ ၂၅၀၀ လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။
မေး. .ဒီနေရာမှာထုတ်ပြန်တဲ့ AAPP ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း ဒီလိုအလားတူတွေ့ရတော့ AAPP ရဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့အနေအထားအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ
ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး.... ကျနော်တို့သိသလောက်၊ ကျနော်တို့လေ့လာမိသလောက်ပေါ့နော် AAPPစားရင်းတွေလည်းကျနော်တို့ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် AAPP စာရင်းတွေကျတော့ ဒီလို ဒလံတို့ဘာတို့ဆိုပြီး စွပ်စွဲပြီးအသတ်ခံရတဲ့လူတွေ ကိုကျတော့ AAPP ရဲ့  စာရင်းထဲမှာမထည့်ထားဘူး။ ကျနော်တို့သိရသလောက်ပေါ့နော်။ AAPP မှာထည့်ထားတဲ့ဟာက ဆန္ဒပြပြီးမှ သေတဲ့လူတွေပါတယ်။ ဥပမာ ဖမ်းဆီးပြီးတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းရင်းနဲ့ နှိပ်စက်ခံရပြီးသေသွားတဲ့လူတွေပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ ရွာတွေထဲသွားပြီးတော့ စစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာ သူတို့သတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူစာရင်းတွေမှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AAPP စာရင်းထဲမှာတော့ ကျနော်တို့တွေ့သလောက်ကတော့ သူတို့ဒလံလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေကိုတော့ အရပ်သားတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးထည့်ထားတာမတွေ့ရဘူး။
မေး.. ကိုမင်းဇော်ဦးတို့ သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကရော ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကို အဓိက အခြေခံထားတာလဲ။
ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး...... ကျတော်တို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အချက်အလက်တွေအရတော့ ဒီ targeted killing ဆိုတဲ့ဟာကတော့ လက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့ဒီအရပ်သားတွေကို စနစ်တကျနဲ့ ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ ကြံစည်သတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကို ကျနော်တို့က targeted killing လို့ခေါ်တာ။ တချို့ကတော့ extrajudicial killing လို့ခေါ်တာပေါ့လေ။ extrajudicial killing ဆိုတာကတော့ အကုန်ပါသွားတာပေါ့။ targeted killing ကတော့ extrajudicial killing ထဲကမှ အမျိုးအစားတမျိုးလို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး. .ဟုတ်ကဲ့။ ခုလိုတွေ့တဲ့လူတွေထဲမှာ လူအမျိုးအစားကို ဥပမာနဲ့ နည်းနည်းလေးရှင်းပြလို့ရမလား။ targeted killing အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားသတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေ။
ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး..... အဓိကကတော့ targeted killing ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါကိုသတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ကြံစည်ပြီးတော့ ..သူကပစ်မှတ်ဖြစ်တယ်၊ သူက လက်နက်ကိုင်မဟုတ်ဘူး။ အရပ်သားပဲ၊ လက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့သူပေါ့နော်။ အရပ်သားပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို သူလျှိုဒလံစသဖြင့်စွပ်စွဲတယ်။ အခုသတ်နေဖြတ်နေတာကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက သတ်တာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ သတ်ဖြတ်မှုကတော့ အတိုက်အခံကသတ်ဖြတ်တာအများစုပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအနည်းစုထဲမှာလည်း သတ်ဖြတ်တာကို ခုနက ဒီတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေ သတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စလည်း ကျနော်တို့တွေ့ရပါတယ်။
မေး.. ဟုတ်ကဲ့။ ဘယ်လိုလူအမျိုးအစားတွေဖြစ်တာများတာကို တွေ့ရလဲ။
ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး.... အသတ်ခံရတာအများစုကတော့ ကျနော်တို့ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပေါ့နော်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုသတ်တာတွေ့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ USDP ပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေ အသတ်ခံရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အများစုကတော့ စစ်ကိုင်းဖက်ကဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ .. ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦးခင်ဗျ။။
မွနျမာမှာ ၂၀၂၁ ခုနှဈစဈတပျကအာဏာသိမျးပွီးနောကျသတျဖွတျခံခဲ့ရတဲ့ အရပျသား ၂၀၀၀ ရှိသှားပွီလို့ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့အမရေိကနျသံရုံးကထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လကျတှမှေ့ာဒိထကျ ပိုမြားနိုငျတယျလို့ သုံးသပျသူတှကေဆိုပါတယျ။ ဒီထုတျပွနျခကျြထဲမှာ စဈတပျနီးစပျတဲ့ လကျနကျမဲ့အရပျသားတခြို့ သတျဖွတျခံရတာတှေ ပါပုံမရဘူးလို့၊ MIPS ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ မွနျမာအငျစတီကြု့က ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျလကျရှိစဈဆငျရေးတှမှောလညျးအရပျသားသဆေုံးမှုတှရှေိနတေဲ့အတှကျတကယျသဆေုံးသူ အရပျသားပေါငျးအနညျးဆုံး ၂၅၀၀ ဝနျးကငျြရှိနိုငျတယျလို့ MIPS အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာမငျးဇျောဦးက ဆိုပါတယျ။ ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ဒေါကျတာမငျးဇျောဦး.. အာဏာသိမျးစကနပွေီးတော့ အရပျသားသဆေုံးမှုက ၂ ထောငျမကဘူးဗြ၊ အားလုံးပေါငျး ကနြျောတို့ဒီဆန်ဒပွပှဲတှမှော ပဈခတျတာတှေ၊ နှိမျနှငျးရငျးနဲ့သတောက ၉ ရာလောကျရှိတယျပေါ့နျော။ နောကျပွီးတော့ ဒီ targeted killing လို့ချေါတာပေါ့။ ဒီ ပဈမှတျထားသတျဖွတျလို့ အရပျသားသတောက ၁၅၀၀ လောကျ ယဘေုယလြို့တော့ ပွောလို့ရတာပေါ့နျော။ အဲဒီမှာတငျ ၂၄၀၀ ရှိနပွေီလေ။ နောကျပွီးတော့ စဈဆငျရေးတှမှော အရပျသားတှသေတေဲ့ကိစ်စရှိတယျ။ ရှာတှမှောသတေဲ့ကိစ်စတှရှေိတယျ။
ဒါတှပေေါငျးလိုကျမယျဆိုရငျတော့ ကနြျောထငျတယျ ၂၅၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ကွားမှာတော့သှားလိမျ့မယျပေါ့နျော။ အခု အမရေိကနျသံရုံးရဲ့ (ထုတျပွနျခကျြ)၂၀၀၀ ဆိုတာကတော့ သူတို့ဘယျကိနျးဂဏနျးကိုပွောသလဲကနြျောတို့လညျး မသိဘူးပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့မွပွေငျမှာ သတောကတော့ အနညျးဆုံးတော့ ၂၅၀၀ လောကျတော့ရှိတယျပေါ့နျော။
မေး. .ဒီနရောမှာထုတျပွနျတဲ့ AAPP ရဲ့ထုတျပွနျခကျြမှာလညျး ဒီလိုအလားတူတှရေ့တော့ AAPP ရဲ့ထုတျပွနျတဲ့အနအေထားအပျေါမှာရော ဘယျလိုသုံးသပျမိပါသလဲ
ဒေါကျတာမငျးဇျောဦး.... ကနြျောတို့သိသလောကျ၊ ကနြျောတို့လလေ့ာမိသလောကျပေါ့နျော AAPPစားရငျးတှလေညျးကနြျောတို့ကွညျ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ AAPP စာရငျးတှကေတြော့ ဒီလို ဒလံတို့ဘာတို့ဆိုပွီး စှပျစှဲပွီးအသတျခံရတဲ့လူတှေ ကိုကတြော့ AAPP ရဲ့ စာရငျးထဲမှာမထညျ့ထားဘူး။ ကနြျောတို့သိရသလောကျပေါ့နျော။ AAPP မှာထညျ့ထားတဲ့ဟာက ဆန်ဒပွပွီးမှ သတေဲ့လူတှပေါတယျ။ ဥပမာ ဖမျးဆီးပွီးတော့ စဈဆေးမေးမွနျးရငျးနဲ့ နှိပျစကျခံရပွီးသသှေားတဲ့လူတှပေါတယျ။ နောကျပွီးတော့ တပျမတျောကနပွေီးတော့ ရှာတှထေဲသှားပွီးတော့ စဈဆငျရေးလုပျတဲ့အခါမှာ သူတို့သတျဖွတျတယျဆိုတဲ့ လူစာရငျးတှမှောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ AAPP စာရငျးထဲမှာတော့ ကနြျောတို့တှသေ့လောကျကတော့ သူတို့ဒလံလို့သတျမှတျပွီးတော့ သတျဖွတျခံရတဲ့သူတှကေိုတော့ အရပျသားတှလေို့သတျမှတျပွီးထညျ့ထားတာမတှရေ့ဘူး။
မေး.. ကိုမငျးဇျောဦးတို့ သုတသေနလုပျထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေရော ဘယျလိုအခကျြအလကျတှကေို အဓိက အခွခေံထားတာလဲ။
ဒေါကျတာမငျးဇျောဦး...... ကတြျောတို့ဒီမှာတှတေဲ့အခကျြအလကျတှအေရတော့ ဒီ targeted killing ဆိုတဲ့ဟာကတော့ လကျနကျကိုငျမဟုတျတဲ့ဒီအရပျသားတှကေို စနဈတကနြဲ့ ပဈမှတျထားပွီးတော့ ကွံစညျသတျဖွတျတဲ့ကိစ်စကို ကနြျောတို့က targeted killing လို့ချေါတာ။ တခြို့ကတော့ extrajudicial killing လို့ချေါတာပေါ့လေ။ extrajudicial killing ဆိုတာကတော့ အကုနျပါသှားတာပေါ့။ targeted killing ကတော့ extrajudicial killing ထဲကမှ အမြိုးအစားတမြိုးလို့တော့ ပွောလို့ရပါတယျ။
မေး. .ဟုတျကဲ့။ ခုလိုတှတေဲ့လူတှထေဲမှာ လူအမြိုးအစားကို ဥပမာနဲ့ နညျးနညျးလေးရှငျးပွလို့ရမလား။ targeted killing အရပျသားတှကေို ပဈမှတျထားသတျဖွတျတဲ့ကိစ်စပေါ့လေ။
ဒေါကျတာမငျးဇျောဦး..... အဓိကကတော့ targeted killing ဆိုတာကတော့ ဘယျသူဘယျဝါကိုသတျမယျဆိုပွီးတော့ကွိုတငျကွံစညျပွီးတော့ ..သူကပဈမှတျဖွဈတယျ၊ သူက လကျနကျကိုငျမဟုတျဘူး။ အရပျသားပဲ၊ လကျနကျကိုငျမဟုတျတဲ့သူပေါ့နျော။ အရပျသားပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကို သူလြှိုဒလံစသဖွငျ့စှပျစှဲတယျ။ အခုသတျနဖွေတျနတောကတော့ နှဈဖကျစလုံးက သတျတာမြိုးဖွဈနတောပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ အမြားစုကတော့ သတျဖွတျမှုကတော့ အတိုကျအခံကသတျဖွတျတာအမြားစုပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဒီအနညျးစုထဲမှာလညျး သတျဖွတျတာကို ခုနက ဒီတပျမတျောထောကျခံတဲ့သူတှေ သတျဖွတျတဲ့ကိစ်စလညျး ကနြျောတို့တှရေ့ပါတယျ။
မေး.. ဟုတျကဲ့။ ဘယျလိုလူအမြိုးအစားတှဖွေဈတာမြားတာကို တှရေ့လဲ။
ဒေါကျတာမငျးဇျောဦး.... အသတျခံရတာအမြားစုကတော့ ကနြျောတို့ ဒီအုပျခြုပျရေးမှူးတှပေေါ့နျော။ အုပျခြုပျရေးမှူးတှကေိုသတျတာတှတေ့ယျ။ နောကျပွီးတော့ USDP ပါတီနဲ့ပတျသကျတဲ့သူတှေ အသတျခံရတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ အမြားစုကတော့ စဈကိုငျးဖကျကဖွဈတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
ဟုတျကဲ .. ကြေးဇူးမြားကွီးတငျပါတယျဒေါကျတာ မငျးဇျောဦးခငျဗြ။။